Umndeni isigaba esiphezulu izimoto Mercedes 600 kungaba lesifanele ngaphezulu ukubiza amakhosi ohlanga, omlando wakhe sihlehlela emuva 1924 lapho kukhululwa i Limousine Mercedes 140 PS. Ngo-1926, umenzi imoto yohlobo lweMercedes Yaphinde yaqanjwa ngokuthi i-Mercedes-Benz, naleliya gama isasekhona namuhla. Ngo-1930, it wafakwa ukukhiqizwa uchungechunge izimoto Mercedes-Benz 770, emiselwe Ubuholi obuphezulu German.
Khona-ke yasungulwa onobuhle ezimbalwa, futhi nakuba umkhiqizo wabo wathatha indawo nemibandela ezinzima emnothweni post-yimpi, zonke izimoto ngokwanele omelelwa German embonini yezimoto kuleli ezidayiswa kanye nemibukiso ngamazwe. Ekugcineni, ngo-1963, ngesikhathi Frankfurt Motor Show wethulwe yi-Mercedes-Benz W100, imodeli kuqala ujenga "wamakhulu ayisithupha" Mercedes. Furor kwaba zinkulu, abamele Ukuhweba inkampani Mercedes ayeyivalile imoto entsha. Emugqeni we-zokufuna ukuthenga imoto yohlobo lweMercedes-600 yathatha iminyaka emine.
Kudos kumshini nje liphenduka. Abanikazi izimoto Mercedes 600 ngezinye izikhathi ezahlukene babe no-Elvis Presley futhi Elizabeth Taylor Beauty, usozigidi Greek -Aristotle Onassis futhi edumile Beatle Dzhon Lennon, esemthethweni induna eSoviet Union leonid uBrezhnev nezinye osaziwayo abaningi.
Mercedes 600 okuhloswe ngesandla kuphela futhi akhiwe izinguqulo ezimbili - Limousine ejwayelekile futhi eside, ngokusekelwe Pullman chassis. Kwakunesidingo futhi ukuguqulwa a Cabriolet uhlobo «Landau», okuyinto Asondele kuphela engxenyeni ezingemuva ophahleni kokuvula kwesigaba umgibeli gumbi. Long gumbi Pullman wamnika amathuba elanele ezihlukahlukene zihlalo inhlanganisela, nemishayo, umagazini emashalofini futhi lezingubo encane.
Mercedes 600, izimfanelo okwakukhona ezingafinyeleleki nezinye izimoto, kwaba aphume mncintiswano ngo-1991. Sekube imizamo eminingana ukudala ozokwenza okufaneleko kuya Mercedes abadumile, kodwa zonke kwahluleka ngokudabukisayo. ukuphumelela kuphela wafika ngo-1991, ngesikhathi iGeneva Motor Show wethulwe yi -Mercedes W140 zakamuva V12 injini nezinqubo ezintsha ezingenakubalwa zobuchwepheshe ezibe endlwaneni eyakhiwe nangaphansi umzimba ebhuthini kanye ophahleni. Nokho Njalo ukuklama ukumangala, yize kwadingeka sisho ukuthini ukusebenza, futhi emotweni cishe ayengakhokha owengeziwe. Ngokwesibonelo, W100 edume uvele 'uyindlalifa "emgceni locondzile lapho sibhekene W140 bakuthathe.
Emhlabeni "wamakhulu ayisithupha» W140 wayengaselona rush enjalo, okuyinto ubephelezelwa ukubukeka W100 ngo-1963. Nokho isithakazelo umshini omusha yayinkulu, nakuba abaningi baseYurophu wayeka eqolo Usayizi imoto, kanye nezindleko zayo eqolo.
Ngo-1992, ukukhiqizwa W140 wagqoka elihambayo e nokulungiswa ezimbili akubizi ukujabulisa Imithetho engaguquki emakethe. Imoto kwadingeka adayise, futhi abathengi ezifana no-Elvis Presley futhi Jack Nicholson wayesehambile. Ngakho yokwakha izimoto eziningi baba etholakalayo ukuya ngokwesilinganiso umthengi Mercedes esiphezulu ekilasini. Okwamanje, Mercedes-600, intengo zazo zokhahlamba kusuka 180 000 kuya 400 000, uyawuthanda ngempela high, funa izinze.
Indlela ukupenda amasondo ingxubevange ukukhanya ngezandla zabo: imiyalelo ezinemininingwane
Rowenta - izinwele-umshanelo. Izibuyekezo ikhasimende
Homemade isithuthuthu Amathiphu yokukhiqiza. Indlela yokwenza ibhayisikili ngezandla zakho?
Yini ehlukile yi-Chekhon inhlanzi: zokupheka okumnandi zeholide